आई पी अधिकारी
छुट्टै गोर्खाल्याण्डका लागि भइरहेको आन्दोलन र दोक्लम गतिरोधका कारण भारतको पुर्वोत्तर क्षेत्र अहिले तातेको छ। गोर्खाल्याण्डको माग ‘जाति र पहिचानका लागि हो’ भनिएको छ।
यहाँको भाषा र संस्कृति नेपालको पहाडसित मिल्छ। उही भाषा बोल्ने, भेष लाउने र संस्कृति मान्नेहरुलाई नेपालमा ‘नेपाली जाति’ र भारतमा ‘गोर्खा जाति’ भनेर चिनाउने प्रयत्न हो सायद गोर्खाल्याण्डको माग। उता सिक्किममा बसेका स्व. नरबहादुर भण्डारी र अन्य केही ‘नेपाली’ बोल्नेहरुले आफूलाई गोर्खाली हैन, नेपाली वा सिक्किमे भन्छन्। यद्यपि उनीहरु गोर्खेहरुको मागमा काध थापिरहेका छन्। सरकारीस्तरमा गोर्खाल्याण्ड आन्दोलनका कारण सिक्किमले भोग्नु परेको आर्थिक नाकाबन्दी अनि जनस्तरमा ‘हाम्रै जातिका’ लागि आन्दोलनकारीहरुको मागको समर्थनमा आवाज बुलन्द हुँदैछ।
गोर्खालीहरुप्रति ऐक्यवद्धता जनाउँदै जुलाई ३० मा विश्वभर र्‍याली, धर्ना वा कोणसभाहरु भए। कतै गोर्खालीहरुले, कतै नेपालीहरुले, कतै भुटानीहरुले त कतै उतैतिर पुस्तौं बिताएका तर उही भाषा बोल्नेहरुले ती कार्यक्रमहरु आयोजना गरेका थिए। नेपाली भाषा बोल्ने भारतीयहरुको समर्थनमा विश्वभरका नेपालीभाषी छन् भन्ने सन्देश दिनु नै कार्यक्रमको खास उद्देश्य थियो।
आयोजकका अनुसार भारतका गोर्खाहरु यति धेरै विभक्त छन् कि उनीहरुको समर्थनमा संसारमा बोलिदिने कोही छैन भनेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिका भ्रमणका क्रममा गोर्खालीहरुलाई भेट नदिएपछि विश्वभरमा गोर्खालीहरु एकताबद्ध छौं भनेर देखाउन यो कार्यक्रम आयोजना गरिएको थियो। विश्वका १५० भन्दा बढी देशमा ती कार्यक्रमहरु भए।
यो कार्यक्रममा गोर्खाल्याण्डको समर्थनमा निस्कनेहरुको गोर्खालीहरुसित सम्बन्ध एउटै बिन्दुमा अडेको छ– भाषा। नेपाली भाषाले यी सबैलाई जोडेको छ।
एउटै भाषा बोले पनि हामी आफूलाई नेपाली, भुटानी, गोर्खाली, बर्मेली आदि ठान्छौं। के जातिको पहिचान भाषाले निर्धारण गर्छ? कि, संस्कृतिले? भाषाले जाति खुट्याउने भए नेपालको तराईमा बस्ने अन्य भाषीले आफूलाई के ठान्ने? नेपालका सन्दर्भमा ‘नेपाली’ पहिचान पाएका र नेपाल बाहिरका ‘नेपाली’ भनिएकामा के भिन्नता छ?
हामीले के हेक्का राख्न जरुरी छ भने भारतमा ‘नेपाली’ बोल्नेलाई नेपालकै ठानिन्छ, भुटानमा ‘नेपाली’ बोल्नेलाई नेपालका ठानिन्छ। त्यही भएर भुटानकाले देश निकाला हुनु पर्‍यो, बर्मेलीहरुको बिल्लिबाठ भयो। भारतकै पनि कैयन् राज्यहरुबाट ‘नेपाली’हरुको लखेटिने क्रम रोकिएको छैन। नेपालकाहरु नेपालबाहिर जहाँ बसे पनि ‘नेपाली’ भाषा बोल्नेलाई नेपाली भन्छन् तर नेपालबाहिर बसेकाहरु ‘नेपाली’ भन्दा अपहेलित हुनुपर्ने परिस्थितिका कारण कैयन अवस्थामा आफूलाई ‘नेपाली’ भन्न रुचाउँदैनन्। नेपालले हामीलाई किन ‘नेपाली’ भनिदिन्छ भन्ने प्रश्न उठिरहन्छ। गोर्खाली र गोर्खाल्याण्ड यही फरक पहिचानको एउटा सुरुवाती बिन्दु हो। नेपाल राज्य आफैंमा आर्थिक र राजनीतिक रुपले बलियो थियो भने सायद ‘नेपाली’ एउटै परिचय काफी हुने थियो।
भाषा बोलेकै भरमा सबै एउटै जातिका हुन् भन्ने तर्क राख्ने हो भने संयुक्त राज्य अमेरिका, बेलायत, अष्ट्रेलिया, न्युजिल्याण्ड, क्यानाडा र अन्य देशमा अंग्रेजी बोल्नेहरुकै शासन छ। तर उनीहरु कसैले पनि आफूहरुलाई अंग्रेज ठान्दैनन्। आ-आफ्नो छुट्टै पहिचान छ। राष्ट्रका आधारमा, भाषाका आधारमा हैन।
यसरी हेर्दा के नेपाल बाहिर बसेकाहरुले सधैं आफ्नो पहिचान नेपाली नै मान्नु पर्छ? अर्को देशमा बसेर पुस्ता फेरिए पनि के हामी नेपालबाहिर बसेर नेपाली भाषा बोल्ने नेपाली नै हौ र? हाम्रो जातीय पहिचान निर्धारण कसरी र कसले गरिदिन्छ? हाम्रो पहिचानको निर्क्योल कहिले हुन्छ? भारतमा जातीय पहिचानका लागि छुट्टै राज्यको लडाइँ चल्दै गर्दा भुटानको ‘नेपालीत्व’का बारेमा केही चर्चा जोड्न मन लाग्यो।
परिचय र पहिचान
परिचय र पहिचान कतिपय सन्दर्भमा समानान्तर अर्थमा प्रयोग भए पनि यी शब्दले दिने भावार्थमा किमार्थ समानता छैन। परिचय व्यक्तिवादको द्योतक हो भने पहिचान समूहगत। ‘तँ को होस्?’ भन्ने प्रश्नको उत्तर सिर्फ नाम र थर मात्र नहुन सक्छ। यो प्रश्न परिचय र पहिचान खोज्ने मामलामा पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ।
हामी भुटानबाट लखेटिनेहरु आफूलाई भुटानी ठान्छौं, ल्होत्साम्पा ठान्छौं वा भुटानका नेपाली, अनि कोही नेपाली भाषी भुटानी। पहिचान तयार गर्न सहज विषय हैन, कुनै सरल फर्मुलाहरु छैनन् यसका। न त यसमा कुनै निर्दिष्ट योजनाले काम गर्छ। समाजको आवश्यकता, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक परिवेश अनि भौगोलिक अवस्थितिले व्यक्तिगत र समूहगत पहिचान निर्माण हुन्छ।
परिचय स्थिर हुन्छ, निश्चित हुन्छ। तर पहिचान सधैं स्थिर हुन्न। यो चलायमान हुन्छ। यो परिवर्तनशील हुन्छ। यो निरन्तर बदलिरहने प्रकृया हो। पहिचान समय सान्दर्भिक र परिवेश सुहाउँदो हुनुपर्छ।
‘भुटानी’को ऐतिहासिक पक्ष
भुटानीमा रहेको नेपालीपन उनीहरुले बनाएका हैनन्। यो शाहवंशीय राजाहरुले आफ्नो शक्ति विस्तार गर्ने क्रममा निर्माण गरेको परिचय हो। हुन त ती शाहहरु र तिनका अनुयायीहरु नेपाल निर्माण अघि आफूलाई गोर्खाली ठान्थे। ‘गोरख’ भक्त भारतीय राजपरिवारहरु लाखापाखा लाग्दा पहाड पसेर आफ्नै शक्ति विस्तार गरी आफूलाई गोर्खाली बनाएका हुन्। गोरखाको पहिचान धेरै समय रहेन, शक्ति विस्तार पछि नयाँ पहिचान स्थापित गरे। त्यस अर्थमा ‘नेपाली’ राजनीतिक परिवर्तनले जुराएको नयाँ पहिचान हो।
हामी भुटान गएकाहरु नेपाल निर्माण हुनु अघि र पछिका दुवै छौं। १६२४ मा भुटान जाने क्रम सुरु मात्र भएको हो, त्यसयता पनि थुप्रै गोर्खाली र नेपालीहरु पूर्वी हिमालय छिरेको इतिहास हामीले नकार्न मिल्दैन। हामी धेरै भुटान र अहिलो वृहत् भारत निर्माण हुनुअघि पुगेका पनि छौं। नेपाल, भारत र भुटान निर्माण नहुँदै हामी हिमालय क्षेत्रका धेरै ठाउँ घुम्यौं। हामी त्यसबेला न नेपाली थियौं, न भुटानी, न गोर्खाली, न भारतीय।
भुटान अस्तित्वमा आएको भर्खर शताब्दी पुग्दैछ। हामीमध्ये केही भुटान बन्नुअघि त्यहाँको रैथाने बनेका हौं। हामी त्यसबेला न भुटानी थियौं, न नेपाली। कालान्तरमा हामी भुटानी भयौं। हाम्रो बोलीचालीको भाषा नेपाली बन्यो। नेपालको निर्माण पछि हाम्रो जातीय पहिचान नेपाली बन्यो। नेपालसितको हाम्रो सम्बन्ध संस्कृति, भेष र भाषाले जोडियो। हामी नेपाली बोल्ने भुटानी बन्यौं। नेपालका नेपालीभन्दा आफू भिन्न हुँ भन्ने देखाउन भारतका नेपालीले आफूलाई गोर्खा भन्न थाले। त्यही पहिचान स्थापित गराउन सुरु भएको लडाइँ ११० वर्षमा पनि टुंगोमा पुग्न सकेको छैन। यसकै सिको गर्दै भुटानका शासकहरुले हामी भुटानका ‘नेपाली’ बोल्नेहरुलाई नयाँ परिचय थपिदिए– लोत्साम्पा। हामीले हाम्रो पहिचान आफैं निर्क्योल गर्न सकेनौ र अर्कैले दिएको पगरीमा हामी रमायौं।
लोत्साम्पा बन्दाबन्दै पनि हामी फेरी नेपाली भनियौं र देश निकालामा पर्‍यौं। त्यसयता हाम्रो पहिचानलाई दर्शाउन धेरै शब्दावलीहरु निर्माण भएका छन्। हामी त्यो मोडमा पुग्यौं, जहाँ ‘हामी’को सट्टा ‘म’ ले प्राथमिकता पाउनु पर्थ्यो। हामीलाई पहिचान रक्षाको हैन जीवन रक्षाको आवश्यकता थियो। शरणार्थी जीवन जिउँदा।
पुनर्वासपछि फेरी हाम्रो पहिचान फेरिदैछ। हामी बहुल संस्कृति र बहुल भाषाको त्यो महासागरमा डुबेका छौं, जहाँ हाम्रो अस्तित्वको आवाज दूरदराजमा कसैले सुन्दैन अनि हाम्रो अस्तित्वको प्रयास कसैले देख्दैन। हामीले यो बहुसंस्कृतिमा घुलमिल हुन सिक्दै गर्दा हुर्कने नयाँ पिँढीले आफ्नो पहिचान कसरी हाम्रो सोच र विचार अनुसार बनाउलान र? हाम्रो विचार अनुसारको भविष्य सरल छैन, सहज छैन।
भूगोल, संस्कृति, भाषा र भेष पहिचानका महत्वपूर्ण मेरुदण्ड हुन्। त्यसमा राजनीति र सामाजिक नियमहरुले सहयोगीको भुमिका खेल्छन्। यीमध्ये पनि सबैभन्दा ठूलो भुमिका संस्कृतिको रहन्छ। कतिपय विद्वानहरुले भाषा र संस्कृतिको भूमिकालाई समान रुपमा लिएका छन् भने कतिले भाषालाई महत्त्व दिएका छन्। तर एकै भाषा भएका कैयन समाजले भिन्न पहिचान बोकेको उदाहरण प्रशस्तै छन्। अंग्रेजी भाषा बोल्नेहरुको संस्कृतिका आधारमा देखिएको विविध पहिचान सबै भन्दा सजिलो उदाहरण बन्न सक्छ।
नेपाली समाजशास्त्री ऋषिकेशव रेग्मीको भनाईमा उस्तै वंशज, समाज सुहाउदो सांस्कृतिक र शारीरिक विशेषताहरु अनि समान खाले मनोवृत्ति र व्यवहार भएमा भिन्न पहिचान बोक्ने समूह बन्न सक्छ। तर उनले यो समूहमा विविध जाति पनि अटाउन सकिने बताएका छन्। हाम्रो सन्दर्भमा यस व्याख्यालाई दाँजेर हेर्ने हो भने हामी ‘नेपाली’ पहिचानमै पुगेर ठोक्किन्छौं। तर त्यही शब्दले मात्र हाम्रो पहिचान अपुग हुन्छ भन्नेहरुको आवाज हामीमाझ बुलन्द हुँदैछ।
दक्षिण एसियाको समाज सायद सबैभन्दा धेरै भाषा बोल्ने समाज मध्येको एक हो। तर पनि यहाँको संस्कृति अधिकतमरुपमा समान देखिन्छ। यसभित्र राजनीति, भाषा र भूगोलको प्रभावले यो ठूलो समाजलाई स-साना समाजमा विभक्त गरेको छ। राजनीतिले भुटान, भारत, बंगलादेश, नेपाल, पाकिस्तानजस्ता पहिचान निर्माण भए पनि भाषा र भेषले त्यसभित्र अरु पहिचानहरु बनेका छन्। तर करिब एकै प्रकारको संस्कृति रहेको यो बृहत समाजको पौराणिक पहिचान ‘भारतवर्ष’ थियो भने आज ‘भारतीय उपमहाद्वीप’ (Indian sub-continent) का नामले चिनिन्छ। यो संस्कृतिले निर्माण गरेको पहिचान हो।
पश्चिमाहरु यो उपमहाद्वीपमा बस्ने सबै भारतीय हुन् भन्ने आँखाबाट हेर्छन्। भारतमा अंग्रेज शासन सुरु भएपछि पश्चिममा भारतीय परिचय विस्तार भयो। केही हदसम्म शारीरिक बनावट समान भएका कारण यो उपमहाद्वीपमा बस्ने हामी कैयौं पश्चिमाहरुको नजरमा भारतीय नै ठहर्छौ। पुनर्वासपछि हामी अधिकांश ‘भारतीय’हरु को रुपमा देखियौं। परिचितले मात्र हामीलाई भुटानबाट आएका भन्ने गर्छन्। त्यसो त नेपालकैले पनि यतातिर ‘भारतीय’ नै भनिनु पर्ने बाध्यता छ। पहिचान निर्माण गर्ने क्रममा हामीले यो ‘भारतीय’ जस्तो देखिने हाम्रो स्वभाव र समानतालाई बदल्न जरुरी छ। पहिचान शारीरिक बनावटबाट हैन भाषा र संस्कृतिले निर्क्योल गर्छ भन्ने प्रमाणित गर्नुछ हामीले।
पहिचान स्थापित गर्ने सवालमा कतिपय परिवेशमा राजनीतिले बढी प्रश्रय पाएको उदाहरणहरु पनि छन्। बढी राजनीतिक उथलपुथल भएका देशमा राजनीतिले पहिचान निर्माणमा बढी भूमिका खेलेको देखिन्छ। उदाहरणका लागि पूर्व सोभियत संघ आबद्ध देशहरुलाई लिन सकिन्छ। दुई दशक अघिसम्म आफूलाई सोभियतको भनेर चिनाउनेहरुको आज पहिचान अर्कै बनेको छ। युगोस्लाभहरु आज भिन्नभिन्न परिचय लिएर बाँचेका छन्।
भुटानको आफ्नै इतिहास हेर्‍यौं भने पनि संस्कृतिले पहिचान निर्माणमा कति भूमिका खेल्यो भनेर देख्न सक्छौं। हामी स्वीकार गरौं या नगरौं तर भुटानको आजको पहिचान भनेको बख्खु लाउने जाति, बुद्ध धर्म मान्ने, लामाहरुको बाहुल्य, सांस्कृतिक र भाषिक रुपमा तिब्बतसित नजिक अनि गुम्बा र ल्हाखाङहरु भएको देश हो। ‘नेपाली’ भनेर चिनिने पहिचानको स्थान भुटानमा कहाँ छ र! नेपाली भाषा लेख्न जान्ने व्यक्ति छैन देशमा, नेपाली पठनपाठन हुने स्थान छैन। नेपाली भाषा विकासको अभियानसित जोडिएको व्यक्ति भेटिन्न त्यहाँ। नेपालीपन झल्कने ठाउँका नाम परिवर्तन भैसके। सांस्कृतिक कार्यक्रममा केही भारतीय संस्कृतिको धोती लाउनेबाहेक सबै बख्खु लाउनेहरु मात्रै हुन्छन्। हाम्रो संस्कृतिका भेषभूषा मासिएको छ। भाषा र संस्कृति मासिएको ठाउँमा पहिचान कसरी बाँचिरहन सक्छ र!
जोंखा भाषा विकास भएको करिब पाँच दशक मात्र हुँदैछ। त्यो भन्दा अघि पनि भुटानको पहिचान, आज जो छ त्यस्तै थियो। राजनीतिक रुपमा भारतको नजिक भए पनि संस्कृतिले त्यहाँको पहिचानलाई अविच्छिन्न बनाएको छ। भारतभन्दा भिन्न देश बनाएको छ। देशको कानूनले पनि भुटानको पहिचान निर्माणमा भूमिका खेलेको छ। भुटानको ‘बहुलवाद (भाषा र संस्कृतिको) भौगोलिक रुपमा ठूला मुलुकमा मात्र सम्भव छ’ भन्ने सिद्धान्तले पनि भुटानको एकल पहिचान निर्माणमा मद्दत पुगेको हो।
नेपाली, गोर्खाली वा अन्य केही
हामी सबैजसो आफ्नो पहिचान देखाउने क्रममा ‘नेपालीपन’को एउटा छनक पक्का दिन्छौं। आज व्यवहारिकरुपमा पनि हाम्रो सम्बन्ध भुटानभन्दा नेपालसित प्रगाढ बन्दैछ। पुनर्वासपछिको हाम्रो ससुराली गाउँ बन्दै छ नेपाल। पर्यटनका लागि होस् वा आफन्त भेट्न, तीर्थयात्रा वा वैवाहिक जीवन सुरु गर्न, आजको हाम्रो प्रमुख गन्तव्य भनेको नेपाल नै बनिरहेको छ। उत्तर पुर्वी भारत र भुटानमा पनि हाम्रो संस्कृति जस्तै मान्ने र भाषा बोल्ने मानिसहरु प्रशस्त छन तर हामीले नेपालमा न्यानोपन भेटेका छौं, मीठो सत्कार पाएका छौं। यसले पनि हामी आफ्नो पहिचानसित त्यो 'नेपालीपन'को गन्ध हट्न दिइरहेका छैनौं। भविष्यमा पनि यो सम्बन्ध टुट्ने सम्भावना कम छ। हामी आफूलाई भुटानी भनेर पनि भुटानसितको सम्बन्ध विस्तारमा राजनीतिक आन्दोलनबाहेक अरु कुनै प्रयास गरिरहेका छैनौं। हामी भुटानीपनलाई बोलीमा र कागजमा सीमित गर्दैछौं। के यसले हाम्रो ‘भुटानी’ भन्ने पहिचानलाई निरन्तरता दिन सहयोग गर्छ?
यद्यपि, पुनर्वाससित देशमा हामी आफूलाई ‘भुटानी’ भनेर नेपालीभन्दा फरक पहिचान दिने प्रयासमा छौं। हामी भुटानमा जन्मेका कारण भुटानी हौं, भुटानी शरणार्थी भएर पुनर्वासित भएका हौं भन्नेहरुको तर्कमा पनि केही दम पक्कै छ। यस तर्कले बोकेको आशय (जन्मका आधारमा पहिचान) सर्वथा लागु नहुन सक्छ। जन्मेको ठाउँलाई पहिचानको आधार मान्ने हो भने हामी पुनर्वासित बने पछि जन्मेको हाम्रा नयाँ पुस्ता, नेपालमा जन्मेको पुस्ता अनि भुटानमै जन्मेको पुस्ताको पहिचान फरक हुने भयो। हामी एउटै पहिचान बोकेको समाज रहेनौं। हाम्रो परिवार नै तीन पहिचान बोकेको बन्ने भयो।
पुनर्वासपछि हामीले यता स्थापित भैसकेका नेपालीसित पिरती गाँस्न सकिरहेका छैनौं। बरु नेपालमै बसेकाहरुसित हाम्रो उठबस बढी हुन थालेको छ। भुटानी र नेपालीका छुट्टाछुट्टै समाज छन्, संघसस्था छन्। एकले अर्काको संस्थामा सदस्यता पाउँदैनन्। हामी भुटानीहरु नेपालीको ‘गैर आवसीय नेपाली’मा गनिन भ्याएका छैनौं।
‘नेपाली’ शब्दले दुईवटा अर्थ बोकेको हुनुपर्छ मेरो विचारमा। एक, ‘नेपाली’ भाषा बोल्ने र दुई, नेपालका नागरिक। अन्तर्राष्ट्रिय प्रयोगमा केही भिन्नता थियो– नेप्लिज र नेपाली। नेपालको नागरिकलाई नेप्लिज र नेपाली भाषा बोल्नेलाई नेपाली भनेर खुट्याउन सहज थियो। नेपालमा पछिल्लो समय अंग्रेजीमा पनि नेपालका नागरिकलाई नेपाली (Nepali) लेख्ने प्रचलन बढ्न थालेपछि आफूलाई गोर्खा भन्ने बाहेक नेपालका अनागरिक तर त्यही भाषा बोल्नेले आफ्नो पहिचानमा अप्ठ्यारोपन देख्न थालेका छन्।
हामी केहीबाहेक धेरैले आफू गोर्खाली हुँ भन्न रुचाउँदैनौं। एक पुनर्वासित भुटानी साहित्यकार भक्त घिमिरेको तर्कमा हामी धेरै नेपाली र गोर्खाली पर्यायवाची शब्दका रुपमा लिन्छौं, जुन सही हैन। गोर्खा वा गोर्खाली र नेपाली एउटै अर्थ लाग्ने शब्दावली हैनन्। राजेस्थानबाट राजपुतहरु मेरठको बाटो हुँदै कुमाऊँ-गढवालतिर छिरेका थिए जसमध्ये केहीमात्र गोर्खा (गोरक्षक) थिए। तिनै गोरखा बने। तिनै राजपुतका सन्तती पृथ्वीनारायण शाहले राज्य एकीकरण गर्दै काठमाडौं खाल्टोलाई हत्याएपछि मात्र नेपाल देश बनेको हो र नेपालीहरु निर्मित भएका हुन्।
हाम्रो इतिहास धेरै बरालिएको छ। हामीले भुगोल धेरै पटक परिवर्तन गर्यौं तर संस्कृतिलाई निरन्तरता दियौं। त्यस हिसाबले हाम्रो पहिचान निर्माणको आधार संस्कृति नै हुनुपर्छ। यो केही दिन वा केही वर्षमा तयार हुने विषय हैन। यसमा दशकौंसम्म निरन्तर प्रयासहरु भैरहनु पर्छ। यसै उद्देश्यलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर वृहत्तर स्तरमा बहस, छलफल र तिनबाट निस्केका निचोडलाई आत्मसात गर्ने प्रयत्नहरु हुनुपर्छ।
(लेखक अष्ट्रेलियामा पुनर्वासित भुटानी हुन । उनले पुनर्वासित हुनु अघि १० वर्ष काठमाडौको नेपाली पत्रकारतिमा मा विताएका थिए ।)
प्रकाशित मिति: सोमबार, साउन ३०, २०७४, ११:२८:१७